ဝေးသွားရတာ အချိန်အခါမသင့်လို့ပါလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လှည့်စားနေဦးမှာလား ? - For her Myanmar
Right Person ကို Wrong Time မှာ တွေ့တယ်လို့ တကယ်ကြီး ထင်နေတာလား?
လူတွေက ပြောကြတယ် … အချိန်ကိုက်ဖြစ်ဖို့က အရေးအကြီးဆုံးပဲတဲ့။ Stella ကတော့ ဒါကိုမှန်တယ်လို့ထင်တယ်။ ဘယ်အရာမဆို အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါသင့်ဖို့ သိပ်လိုအပ်တယ်။ အထူးသဖြင့် အချစ်ရေးမှာပေါ့။
ကိုယ်က အရမ်းချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်၊ ကိုယ်နဲ့ သက်ဆုံးတိုင် အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်နေခဲ့သူ တစ်ယောက်နဲ့ ကိုယ်မျှော်လင့်ထားသလို လက်မတွဲရဘဲ လမ်းခွဲခဲ့ရတဲ့အခါ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြရတဲ့အခါမှာ Stella တို့တွေက “လူမှန်ကို အချိန်မှန်မှာမတွေ့ခဲ့လို့ပါ”၊ “ငါတို့စောစောတွေ့ခဲ့ကြရင် ကောင်းမှာ” ၊ “နောက်ငါးနှစ်လောက်မှ ငါတို့တွေ့ဖြစ်ရင် ဒီထက်ပိုအဆင်ပြေမှာ” စသဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဖြေသိမ့်နေတတ်ကြတယ်။
မှန်ပါတယ်။ အချိန်ကိုက်မဖြစ်တာကြောင့် လွဲခဲ့ရတဲ့ ဖူးစာတွေ အများကြီးပါ။ “Timing isabitch” ပေါ့.. ဒါပေမဲ့ Stella တို့က ကိုယ်တွေ့ခဲ့တဲ့သူက ကိုယ့်အတွက် Right Person မဟုတ်တာကိုတော့ သိလျက်နဲ့ ဝန်မခံချင်ကြဘူး။
တစ်ချိန် ကိုယ့်ရဲ့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ တစ်ခြမ်း(Right Person)နဲ့ ဆုံဖြစ်တဲ့အခါ…
အဲဒီလူက ကိုယ့်ကို ပိုကြိုးစားချင်အောင် တွန်းအားပေးတဲ့လူမျိုး၊ ကိုယ့်အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည်ပေါ်လာအောင် ကူညီပေးမယ့် လူမျိုး၊ ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသော အစိတ်အပိုင်းတွေကို ရှင်သန်လာအောင် ပေါင်းသင်ရေလောင်းပေးမယ့်လူမျိုး၊ အခက်အခဲတွေကြုံလာရင် ရှောင်သွားမှာမဟုတ်ဘဲ တူတူကျော်ဖြတ်ဖို့ ခွန်အားတွေပေးမယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ်လျှောက်တဲ့လမ်းမှာ အတားအဆီးမဖြစ်စေတဲ့လူမျိုးပေါ့။
ဒီလိုလူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ အရင်လူတွေနဲ့ ဖူးစာမဆုံခဲ့တာကို ကျေးဇူးတင်လာလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အတိတ်က စိတ်ထိခိုက်စရာတွေကို မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ အရင်ကထက် ပျော်ရွှင်လာရလိမ့်မယ်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လူတစ်ယောက်နဲ့ ဝေးကွာသွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာ လူမှန်ကို အချိန်မှန်မှာ မတွေ့ရလေခြင်းဆိုပြီး ဝမ်းနည်းပူဆွေးမနေပါနဲ့။ အသိတရားဝင်ပါ။ လူမှန်ကို အချိန်မှားမှာတွေ့တယ်ဆိုတော့ တကယ်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လှည့်စားမှု တစ်ခုသက်သက်ပါပဲ။
Right person ကို ဘယ်တော့မှ wrong time မှာ မတွေ့နိုင်ဘူးလေ… ဘာကြောင့်ဆို Right person နဲ့ဆိုရင် ဘယ်အချိန်မဆို ကိုယ့်အတွက် Right time ပဲဖြစ်နေမှာမို့ပေါ့…
Right Person ကို Wrong Time မှာ တှတေ့ယျလို့ တကယျကွီး ထငျနတောလား?
လူတှကေ ပွောကွတယျ … အခြိနျကိုကျဖွဈဖို့က အရေးအကွီးဆုံးပဲတဲ့။ Stella ကတော့ ဒါကိုမှနျတယျလို့ထငျတယျ။ ဘယျအရာမဆို အခွအေနနေဲ့ အခြိနျအခါသငျ့ဖို့ သိပျလိုအပျတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အခဈြရေးမှာပေါ့။
ကိုယျက အရမျးခဈြတဲ့သူတဈယောကျ၊ ကိုယျနဲ့ သကျဆုံးတိုငျ အဆငျပွမေယျလို့ ထငျနခေဲ့သူ တဈယောကျနဲ့ ကိုယျမြှျောလငျ့ထားသလို လကျမတှဲရဘဲ လမျးခှဲခဲ့ရတဲ့အခါ၊ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ နှုတျဆကျခဲ့ကွရတဲ့အခါမှာ Stella တို့တှကေ “လူမှနျကို အခြိနျမှနျမှာမတှခေဲ့လို့ပါ”၊ “ငါတို့စောစောတှခေဲ့ကွရငျ ကောငျးမှာ” ၊ “နောကျငါးနှဈလောကျမှ ငါတို့တှဖွေ့ဈရငျ ဒီထကျပိုအဆငျပွမှော” စသဖွငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဖွသေိမျ့နတေတျကွတယျ။
မှနျပါတယျ။ အခြိနျကိုကျမဖွဈတာကွောငျ့ လှဲခဲ့ရတဲ့ ဖူးစာတှေ အမြားကွီးပါ။ “Timing isabitch” ပေါ့.. ဒါပမေဲ့ Stella တို့က ကိုယျတှခေဲ့တဲ့သူက ကိုယျ့အတှကျ Right Person မဟုတျတာကိုတော့ သိလကျြနဲ့ ဝနျမခံခငျြကွဘူး။
တဈခြိနျ ကိုယျ့ရဲ့ ပြောကျဆုံးနတေဲ့ တဈခွမျးနဲ့ ဆုံဖွဈတဲ့အခါ…
အဲဒီလူက ကိုယျ့ကို ပိုကွိုးစားခငျြအောငျ တှနျးအားပေးတဲ့လူမြိုး၊ ကိုယျ့အိပျမကျတှေ အကောငျအထညျပျေါလာအောငျ ကူညီပေးမယျ့ လူမြိုး၊ ကိုယျ့ရဲ့အကောငျးဆုံးသော အစိတျအပိုငျးတှကေို ရှငျသနျလာအောငျ ပေါငျးသငျရလေောငျးပေးမယျ့လူမြိုး၊ အခကျအခဲတှကွေုံလာရငျ ရှောငျသှားမှာမဟုတျဘဲ တူတူကြျောဖွတျဖို့ ခှနျအားတှပေေးမယျ့လူမြိုး၊ ကိုယျလြှောကျတဲ့လမျးမှာ အတားအဆီးမဖွဈစတေဲ့လူမြိုးပေါ့။
ဒီလိုလူနဲ့တှတေဲ့အခြိနျမှာ အရငျလူတှနေဲ့ ဖူးစာမဆုံခဲ့တာကို ကြေးဇူးတငျလာလိမျ့မယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ အတိတျက စိတျထိခိုကျစရာတှကေို မမေ့ပြေ့ောကျပြောကျဖွဈသှားလိမျ့မယျ။ အရငျကထကျ ပြျောရှငျလာရလိမျ့မယျ။
အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ လူတဈယောကျနဲ့ ဝေးကှာသှားတဲ့အခြိနျမြိုးမှာ လူမှနျကို အခြိနျမှနျမှာ မတှရေ့လခွေငျးဆိုပွီး ဝမျးနညျးပူဆှေးမနပေါနဲ့။ အသိတရားဝငျပါ။ လူမှနျကို အခြိနျမှားမှာတှတေ့ယျဆိုတော့ တကယျတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ လှညျ့စားမှု တဈခုသကျသကျပါပဲ။
Right person ကို ဘယျတော့မှ wrong time မှာ မတှနေို့ငျဘူးလေ… ဘာကွောငျ့ဆို Right person နဲ့ဆိုရငျ ဘယျအခြိနျမဆို ကိုယျ့အတှကျ Right time ပဲဖွဈနမှောမို့ပေါ့…
Tags: Letter from heart, Open Letter, Relationship, timing